Sharmarke: Waa la iga been abuurtay - BBC Somali
Sharmarke: Waa la iga been abuurtay
Raiisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya, Cumar Cabdirashiid Sharmarke, ayaa sheegay in laga been abuuray saxiixa heshiiska dowladda KMG ah ay la gashay shirkadda ajnabiga ah ee qaabilsan dhinaca ammaanka ee la yiraahdo SARACERN.
Jawaabta, Cumar Cabdirashiid ayaa ka danbeysay kadib markii toddobaadkan horraantiisi uu Raiisul Wasaare, Maxamed Cabdullaahi Maxamed, hortagay baarlamaanka KMG ah si uu uga jawaabo heshiiskaasi.
Raiisul Wasaare Maxamed Cabdullaahi ayaa waxa uu sheegay in heshiiska uu ka horeeyay isaga oo ay saxiixday xukuumaddii hore.
Cumar Cabdirashiid oo wareysi siiyay BBC isaga oo jooga magaalada Dubai waxa uu sheegay in aanu waxba ka ogeyn heshiiskaasi, isla mar ahaantaana aanay marnaba ka wada hadlin isaga iyo Madaxweyne Shariif.
Waxa uu ku eedeeyay xafiiska Madaxweynaha iyo xubnaha ka ag dhawaa inay ka danbeeyeen warqaddaasi uu ku tilmaamay inay tahay mid laga been abuur.
Mr Sharmarke waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu baarlamaanka u caddeeyo arrintan.